Al-Shabaab oo la kulmay jab weyn
Ciidammada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa taagerrada siiya ee Beesha Caalamka waxay dalka ka wadaan howl-gallo nidaamsan oo ka dhan ah ururka dilaaga ah ee al-Shabaab. Mid ka mid ah howl-galladaas oo laga sameeyay magaalada Baardheere ee Gobalka Gedo ayaa lagu soo warramayaa in ciidammada Soomaaliyeed ay halkaas ku qabteen dhowr xubno oo ka tirsan kooxda al-Shabaab qeybta loo yaqaanno Amniyaat kuwaasoo lagu yaqaanno fulinta dilalka qorsheysan ee uu ururka u geysto dadweynaha Soomaaliyeed iyo kuwo ururka u adeegsado sameynta walxaha qarxa.
Sidoo kale, Ciidammada Xoogga Dalka waxay magaalada Marka ku qab-qabteen 20 ka mid ahaa kooxda dhiig-cabtada ah ee al-Shabaab. Ciidammada waxay xog la hubo ka heleen dadweynaha ku daqan magaaladaas kuwaasoo yaqaannaan xubnaha al-Shabaab ee ku dhex dhuumanayaan bulshada. Sarkaallada sare ee arrimaha amniga waxay sheegeen in haatan xaaladda amniga ee magaalada ay aad u sugan tahay waxayna u mahad-celiyeen Ciidammada Xoogga Dalka iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee sida wadajirka u wada shaqeeyay si nabad-diidka al-Shabaab looga cirib-tiro magaalada.
Sidoo kale dadweynaha waxay farxad ka muujiyeen ka saaritaanka dhiig-cabtada al-Shabaab ee magaalada. Dhanka kale, Ciidammada Xoogga Dalka waxay Gobalka Shabeellaha Hoose ku dileen nin u dhashay dalka Ruushka kaasoo u dagaallamayay dhiig-cabtada al-Shabaab. Sidoo kale, weerar duqeyn dhanka cirka ah ayaa lagu dilay 3 ka tirsanaa ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab.
Xorriyo 2 Views : 139
Xorriyo 1 Views : 9589